Carlo Ancelotti oo ku laaban doona kooxdiisii hore Chelsea? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Carlo Ancelotti oo ku laaban doona kooxdiisii hore Chelsea?
(15-12-2017) Macalinka u dhashay dalka Talyaaniga ee Carlo Ancelotti ayaa lasheegayaa in uu dib ugu laaban doono Kooxdiisii hore ee Chelsea marka uu dhamaado xiligaan isaga oo xilka kala wareegi doona Ninka ay isku dalka ka soo jeedaan ee Antonio Conte.
Warar ay baahiyeen Warbaahinta Ingiirsku khamiistii ayaa sheegay in Milkiilaha kooxda Chelsea uu si qaas ah ula kulmay Carlo Ancelotti kaas oo ay isku afgarteen in marka uu dhamaado xiligaan uu ku soo laabto Stamford Bridge.si uu xilka ugala wareego Antonio Conte oo uusan ku qanacsanayn xiligaan.
Wargeyska Daily Record oo ahaa kii u horeeeyey ee Warkaan baahiya ayaa ku adkeysanaya in Carlo Ancelotti ku soo laaban doono Chelsea marka uu dhamaado xiligaan kadib Wadahadal is afgarad ku dhamaaday oo uu layeeshay Milkiilaha kooxdaas Roman Abramovich.kaas oo Macalinka xiligaan doonaya in uu badalo.
Carlo Ancelotti ayaa horay u soo noqdey macalinka kooxda Chelsea isaga oo xiligiisii koowaad u qaaday Horyaalka dalka England balse 2 Xili kadib ayaa laga cayriyey hadana waxa shaqo ah maqabto kadib markii ay shaqada ka joojisey Naadiga Bayren Munich waxaana doon doonayey Xulka dalka Talyaaniga iyo AC Milan.